ကြောက်လန့်ဖွယ်အတွေ့အကြုံ — Steemkr
ငါဆိုင်ဖို့ချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းများနှင့်ပြည့်စုံဧရိယာမှတဆင့်လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာငါချုံထဲသို့အမှားကျဉ်း footpath မှစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မဟုတ်ခဲ့ကြောင်း မှလွဲ. လည်းမနှစ်မြို့ဖွယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဆိုင်ကနေတချို့မုန့်ညက်ကိုဝယ်ယူအလုံအလောက်အန္တရာယ်ကင်းသလိုပဲ။ အဆိုပါဆိုင်အနီးဆုံးတဈခုဖွဈသညျနှငျ့ငါ့မိခင်ကျွန်မသူမ၏များအတွက် simpleerrand run ဖို့လုံလောက်တဲ့နှစ်အရွယ်မှာမှတ်။
ရုတ်တရက်ကျွန်မအချို့ချုံအတွင်းမှတစ်ဦးဟိန်းကြား၏။ ၎င်း၏အစွယ် bared နှင့်အတူတစ်ကွမျးကွုခွေးငါ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ထင်ရှား၏။ ငါ froze ။ ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်လျှင်ငါကမတိုက်နိုင်သိတယ်။ ငါသည်သင်တို့ကိုနေတုန်းပဲစောင့်ရှောက်လျှင်, တစ်ဦးခွေးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ကြားသိခဲ့ရတယ်။
ဒါဟာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါခွေးငါ့ကိုမှတက်ရောက်သဖြင့်လူအပေါင်းတို့ကျော်ငါ့ကိုကဲ့ရဲ့သံ, ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုကိုက်ခဲ့ပါဘူး။ ငါကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်တုနျလှုပျဒါပေမဲ့မရွှေ့မလျှောက်ဝံ့ကြ။
ခဏတစ်ပြီးတဲ့နောက်ဒါဟာငါ့ကိုဘေးမှာအိပ်လေ၏။ ငါကမသွားဘေးကင်းလုံခြုံတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့ပေမယ့်အခိုက်ငါကတက်ရပ်ပြင်းထန်စွာနောက်တဖန်မြည်နေတဲ့ခြေထောက်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ငါပိတ်မိခဲ့သည်! အဆိုပါခွေးငါ့ကိုရွှေ့မသွားပါစေလိမ့်မယ်။ ငါသည်အဘယ်သို့ပြုနိုင်မည်နည်း
ငါကြောက်လန့်စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးငါနေဆဲရှိနေဆဲအဖြစ်ရှိသမျှတို့ကိုငါလက်ျာဘက်ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်လောက်ရှည်လျားငါနဲ့တူအဲဒီမှာရပ်နိုင်မည်နည်း အကြှနျုပျ၏ခွကေိုပြီးသားထုံခံစားခဲ့ကြသည်။
ထိုအခါငါစိတ်ကူးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်တိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေးဝေးခဲ့သည်။ ငါ "! ကူညီပါကူညီပါ!" အော် ငါ့အလိုရှိသမျှအစွမ်းသတ္တိနှင့်အတူ။ အဆိုပါခွေးရှုပ်ထွေးကြည့်ရှုဒါပေမယ့်ငါ့ကိုမတိုက်ခဲ့ပါဘူး။
အဆိုပါဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုငါ့အသံတွေကြားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သို့ရောက်ကြ၏။ သိသာသည်သူ၏ခဲ့သောခွေး, ယင်း၏အမြီးညိနှင့်၎င်း၏နားရွက်ကိုပြန်ခေါက်။ သူဟာလျင်မြန်စွာတစ်ကွင်းဆက်ယူဆောင်နှင့်စာတိုက်ကချည်ထားလေ၏။ ငါဒါစိတ်သက်သာရာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်တောင်းပန်ငါ့ကိုမုန့်ညက်အခမဲ့ packet ကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။
အဘယ်အရာကိုကဖြစ်နေတဲ့ကွောအတွေ့အကြုံကို။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော့ဘူးခွေးနှင့်အတူဒုက္ခမရှိခဲ့ဘူး။ အဆိုပါဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကအားလုံးကိုအချိန်များတွင်တက်ချည်ထားသိုထား၏။
esteem frightful experience life